ASA SOSIALY : Niantoka ny fandefasana nody an’i Bebe Rasoaritiana 83 taona i Assanati Famo Gidraka
Niantohan’ny fikambanana Werawera tsy maintsy mandeha ny saran-dalany ho any Tsihombe, ny sakafo an-dalana mahampy an’i Bebe Rasoa, ahafahany miainga eto Mahajanga ka hihazo ny tanindrazany niaviany. 14 janvier 2020
Ny zoma, faran’ny herinandro teo no niainga teto Mahajanga izy ary mbola nomena vola anaty valopy ihany koa izy hanorenany ny fiainany rehefa tonga any amin’ny havany izy. Nipetraka eo an-davarangan’olona ao amin’ny fokontany Ambalavola ity ramatoa be ity satria tsy manan-kialofana. Ny olona miantra no mba ahafahany misakafo. Ny fokontany no miahy azy, ary ny lefitry ny sefo fokontany no nifandray tamin’ireo tompon’andraikitry ny fikambanana Assanati Famo gidraka eto Mahajanga, ka nitadiavana fiaraha-miasa momba azy taorian’ireny dobo rano be teo iny. 12 taona no nipetrahany teto.
Mbola tanora i Bebe Rasoa no tonga nitady ravinahitra teto Mahajanga ; tsy manan-janaka sy tsy manan-kavana eto izy. Tohina ny fo hoy ny filohan’ny fikambanana tatsimo amin’izao ataon’ny Assanati Famo Gidraka izao. Ny fikambanana no tokony handray andraikitra amin’izao nefa tsy nisalasala izy nanampy, hoy hatrany izy fa misaotra azy. Fifampitsinjovana sy fifanampiana no tanjona, hoy hatrany ireo mpikambana ary Werawera tsy maintsy mandeha.